Veruzhinji Vanokurudzirwa Kunzwisisa 'Climate Change' Kuti Munyika Musaramba Muchiita Nzara
Reverend Forbes Matonga
Nyanzvi munezvechikafu dzinoyambira kuti vanhu muZimbabwe vanofanirwa kunzwisisa kuti kupinduka kwemamiriro ekunze, kana kuti ‘Climate Change’, chinhu chikuru chinobata hupenyu hwavo uye chichava navo kwenguva refu.
Vanoti kupinduka kwekunze kunovhiringa kunaya kwemvura pamwe chete nekutadzisa makuriro anoita zvirimwa.
Svondo rapfuura, hurumende yeJapan yakapa Zimbabwe mari inopfuura mamirioni mashanu emadhora ekuAmerica kuti ishandiswe mukutenga chikafu chevanhu vakatarisana nenzara munyika. Mari iyi yakaiswa mumaoko esangano rinobatsira mune zvechikafu pasi pose, reWorld Food Programme (WFP), iro richatenga chibage nekuona kuti chasvika kuvanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe mwedzi wa Chikumi usati wapera.
Kusanaya kwemvura, pamwe chete nemamiriro akaita nyaya dzezvehupfumi muZimbabwe, zvakonzera kuti Zimbabwe itarisane nedambudziko guru munezvekudya.
Ongororo ichangoitwa muZimbabwe yese ne Integrated Food Security Phase Classification (IPC) inoratidza kuti vanhu vakatarisana nedambudziko rechikafu gurusa munyika vave kupfuura mamirioni mana, zvinorevava kuti vanhu vatarisana nedambudziko rezvekudya vawedzera kubva pavakange vari pakupera kwe gore rapfuura apo vakange vari mamirioni matatu. Ongororo ichangopedziswa kuitwa iyi, inoratidzavo kuti vanhu vakatarisana nedambudziko rechikafu munyika vave padyo nemamirioni masere.
Nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamiravo sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vaudza Studio 7 kuti Japan yaratidza chido chikuru kuvanhu veZimbabwe nekuti yavarangarira panguva iyo nyika zhinji pasi pose, kusanganisira iyo Japan, dziri kunetseka nekubatsira zvizvarwa zvadzo mudambudziko re kuchirwere cheCovid-19. Reverend Matonga vati hurumende yeJapan inofanirwa kutendwa zvikuru uye vanoti vanovimba kuti nyika dzekunze dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe nekupa chikafu kune vakatarisana nenzara munyika sezvo kunaya kwemvura kusisavimbike.
Asi, vativo zviripo zvizhinji zvinogona kuitwa nevanhu munyika kuti vazvibatsire uye kuti vasagara vakatarisana nenzara mudzimba dzavo.